घान्द्रूकको घुमाइ – नेवाः टाइम्स
कहिले काहीँको घुमफिर यस्तो पनि हुनसक्छ– घुमफिर त गर्ने तर गन्तव्यको निक्र्यौल नै नहुने । यस्तै अनिर्णित अवस्थामा घरबाट निस्केर विहानै कलंकी चोक पुग्यौं । छोरा, श्रीमति र आफूसहितको एउटा सानो यात्रादल बनाएर । निर्यौल गर्न नसके पनि गोरखा जाने कुरा प्राथमिकतामा परेको महसूस त तीनै जनालाई भएको थियो । तर गोरखाको गाडि बसपार्कबार्ट भरिएर आउँने, चढ्न उतै जानु पर्ने भन्ने कुरा सुनेपछि हामीलाई बसपार्क पुग्ने झञ्जट गर्न मन लागेन । गोरखा जान नसकिने भएपछि अर्को निर्णय गर्नु थियो, तर गर्न गा¥हो भइरहेको थियो । जीवनमा थुप्रै यात्रा गरियो तर यस्तो अनिर्णित यात्रा त पहिलो चोटी नै भयो । केही दिनको लागि कहीँ त जाने जाने, तर कहाँ जाने ? गन्तव्य चयन गर्न नसक्दा तीनै जनामा अनौंठो खालको हाँसो थियो । यसो हुनाको खास कारण हो, ती सबै गन्तव्यहरु हाम्रो लागि खास नयाँ थिएन ।
यात्रामा भेटिने सहयात्रीहरु पनि थरी थरीका हुन्छन् । सहयात्रीहरुबाटै पनि यात्रा रमाइलो हुन्छन् कहिलेकाहीँ । जीपमा त थुप्रै मान्छे चढेका छन् तर थोरै सँगमात्र कुराकानी भयो । यही क्रममा थाहा भयो, हामी घान्दू्रक पुग्ने बेलासम्ममा त सबै होटेलहरु प्याक भइसक्छन्, समस्या पर्नसक्छ । नयाँ वर्षको अवसर पारेर हामी यात्रामा निस्केका, हामी मात्र कहाँ हो र, अरु पनि त्यस्तै गरी निस्केका हुन्छन् । होटेलहरु प्याक हुनु स्वाभाविक हो । एक जना सहयात्रीले सोध्यो– होम स्टेमा बस्नु हुन्छ ? यस्तोमा होम स्टे मात्रै के खाली होलान् र ? तर पनि हुन्छ भनें । मोबाइल सेल झिक्यो र गाडी भित्रैबाट फोन हान्यो । कोठा खाली भए नभएको बुझ्यो । त्यो घरमा कोही आइनसकेको रहेछ । हाम्रो लागि भनेर एउटा कोठा रिजर्भ गर्न भन्यौ । ढुक्क भयौ । जीप रोक्दासम्ममा साँझ परेको थियो, पुग्दा झपक्कै अँध्यारो भइसकेको थियो । काठमाडौं बस्ने ती युवक पनि उही होमस्टेमा बस्ने रहेछन् । घान्द्रुकमा सोलार इनर्जीको क्षेत्रमा काम गर्ने तीसहित हामी चारै जना त्यतातर्फ लाग्यौं ।
घान्द्रूककाे चियावारी । लेखकः लेखक
बाहिर यताउताबाट नानाथरीका आवाज आइरहेको थियो । विशेष दिनमा विशेष रमाइलो गर्न आएकाहरु न परे । एउटी छिमेकी महिला हुत्तिदै आइन् र हाँस्दै भनिन्– ‘‘माथि होटेलमा ठुल्ठुला स्वरमा गीत बजाएर होहल्ला गर्दै नाचिरहेकाहरु त सबै बहिराहरु पो रहेछन् त ।’’
घान्द्रूक गाउँ । तस्वीरः लेखक
स्थानिय यातायातकाे रूपमा खच्चरहरू । तस्वीरः लेखक